Dhawunirodha YouTube Vhidhiyo Thumbnail Image - Tsigira mazhinji mawebhusaiti
Dhawunirodha YouTube Vhidhiyo Thumbnail Image
❤ Dhawunirodha zvese zvidhori zvemifananidzo yeYese YouTube Vhidhiyo neiri nyore chishandiso.
Kuti uwane iyo vhidhiyo vhidhiyo yeYese YouTube Vhidhiyo isa iyo yakajairwa URL yevhidhiyo mubhokisi rezvinyorwa pazasi.
⚠ URL yako inofanirwa kutaridzika seiyi:
Tora YouTube Thumbnail
Ino saiti inokutendera kurodha zvigunwe zvemamwe mavhidhiyo eYouTube nokupinda muvhidhiyo URL.
⚠ Bhatani bhatani rine chinyorwa chitsva. Gadziridza izvozvi.
⚠ Mamwe mawebhusayithi ekushamwaridzana anoda kudzoreredza peji rauri kuona kuti uwane iyo tepe yakakwana.
✚ Wedzera kune Zano
❝Wedzera maonero emavhidhiyo nekuwedzera mazano❞
☀ Thumbnail Grabber inotsigira kurodha zvimedu kubva Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, DailyMotion, Vimeo, Tumblr, Imgur, Liveleak, TED, Mashable, 9gag, Break, Soundcloud, Flickr, ESPN, IMDB, Buzzfeed, Okru, Metacafe, WorldStarHipHop uye nezvimwe. ☁
Nei uchisarudza iyi yakanaka chishandiso?
Kukurumidza uye kusununguka kwete kutsamwa
Mamwe maturusi ekuwedzera
Dhizaini yemazuva ano
Tsigira mazhinji mawebhusaiti
❝Mufananidzo wenyaya unongochengeterwa mudziyo wako❞
♻ Bvisa Nhoroondo
Dzvanya bhatani reZano kuti uwane mazano akanaka.
Kana uchishandisa Mac OS X
Bvisa Youtube Poster
Tora zvese YouTube vhidhiyo zvigunwe mune imwechete konzera.
Tora Thumbnail 2.0 ← Dhonza izvi kune ako mabhukumaki ebha
❝Iyi script inogona kubvisa vhidhiyo poster kubva kune chero webhusaiti.❞
Mashandisiro aungaita YouTube Thumbnail Image Generator
Nhanho 1 : Isa YouTube URL
Kopa uye Rovera iyo YouTube vhidhiyo URL mune yakapihwa munda.
Nhanho 2 : Dzvanya ❝Tora YouTube Thumbnail❞
Kuti utarise uye Dhawunirodha YouTube icon yepikicha, tinya pane iyo bhatani reOrange
Nhanho 3 : Tora YouTube Vhidhiyo Thumbnail Image
Dhawunirodha icon yepikicha kubva kuYouTube mune yakawanda mufananidzo mhando uye saizi
Yemahara YouTube Thumbnail Downloader
Ongorora Usati Wadhirowa
Sezvo iwe unodzvanya pane Bhatani bhatani mushure mekunamatira URL yevhidhiyo, kuongorora kwezvifananidzo zvese zvemagineti kunopihwa. Unogona kutarisa saizi yemufananidzo wepikicha wobva wadzvanya pane Bhatani bhatani kuti uchengetedze Thumbnails yeYouTube Video pane yako kifaa.
Tora Wako Wakanakisa Image size
Tora YouTube Vhidhiyo yeThumbnail Image muhukuru hwakasiyana sekusarudza kwako. Paunogona kudzvanya pane Bhatani bhatani, tarisa chiratidzo chemufananidzo muhukuru hwakawanda hunopihwa. Unogona kusarudza saizi yepamhepo pakati 480x360, 120x90, 320x180, 1280x720 uye utore iyo.
YouTube Thumbanish Image Extractor ibasa repamhepo iro rinokutendera kuti utarise uye utore zvidhori zvemifananidzo kubva kuYouTube vhidhiyo mune HD. Unogona kuwana Thumbnail mufananidzo kubva kuYouTube pane chero ipi zvayo yaunofarira sisitimu yeWindows, Linux OS, Mac muchina, Android, kana iPhone.
Huru NeZero Limitations
Izvo zvakasununguka zvepamhepo sevhisi yekuchengetedza YouTube Thumbnail mufananidzo. Iwe unongoda kuisa chinongedzo uye Tora Mufananidzo weYouTube Vhidhiyo mumaminitsi. Pamusoro pezvo, sevhisi yakasununguka kubva kune chero inogumira zvakare. Iyo yakazara-browser-based application uye inogona kuwana kubva kune chero chikuva kana mudziyo.
Tsvaga Mibvunzo Yako uye Mhinduro Pano - Sei Kureta YouTube Vhidhiyo Thumbnails?
+ Chii chinonzi thumbnail?
Thumbnails inoitwa nenzira kwayo pamapeji ewebhu kunge akaparadzaniswa, makopi madiki emufananidzo wekutanga, muchikamu nekuti chinangwa chimwe chemufananidzo wepicha pane peji rewebhu kuderedza bandwidth uye nguva yekurodha.
Vamwe vanogadzira webhu vanogadzira mabhatani ane HTML kana mutengi-padanho rekunyora iro rinoita kuti browser remushandisi rinyaradze iwo mufananidzo, pane kushandisa diki kopi yemufananidzo.
+ Ndinogona kubvisa ese YouTube Vhidhiyo Thumbnails kubva pane yangu vhidhiyo mune yepamusoro resolution?
Ehe, iwe unogona nyore nyore kubvisa uye kurodha zvese zvigunwe zveYouTube vhidhiyo uchishandisa ino yekurodha basa.
Ingoitevedzera pazasi matanho ekutora mufananidzo mufananidzo kubva kuYouTube vhidhiyo:
Vhura YouTube Vhidhiyo Thumbnail Rodha pasi peji rewebhu.
Enda kuYouTube.com uye Kopa yako YouTube Vhidhiyo link
Isa iyo mu Enter Enter Video Vhidhiyo link bhokisi.
Dzvanya pane Bhatani bhatani kuti ubate nekukurumidza kubata zvese zvigunwe zvevhidhiyo yako.
Yedu YouTube Vhidhiyo Thumbnail Downloader inokurumidza kuratidza zvese zvakabviswa YouTube Thumbnails kubva kuVhidhiyo yako.
Unogona nyore Kutarisa mifananidzo yese yeThumuru uye tarisa yavo Masiriki muPixels.
Kana iwe uchida kudhanilodha, saka iwe unogona zvakare kurodha inoenderana YouTube Vhidhiyo Thumbnails nekudzvanya ku Download bhatani.
Nakidzwa kutora yako Vhidhiyo Thumbnails.
Iwe unofanirwa kuita pamusoro matanho akareruka kuti uchengetedze yako YouTube Vhidhiyo Thumbnail mifananidzo.
+ Saizi ndeipi YouTube.
Youtube vhidhiyo zvigunwe zvinowanikwa mune ina mana hunhu uye hupamhi: SD 640 x 480, MQ 320 x 180, HQ 480 x 360, HD 1920 x 1080.
Iwe unogona kuwana chero saizi yepikicha yemufananidzo weYou vhidhiyo kubva kune yakajairwa fomati. Iwe unongoda yakasarudzika vhidhiyo ID, iyo inogona kuonwa muvhidhiyo URL.
Thumbanish Image Fomu: http://img.YouTube.com/vi/video_id/FILE_NAME.jpg
Iwe unogona kutsanangura zita refaira zvichienderana nehukuru hwetepe raunoda. Zvimwe zvezvinowanzo shandiswa zvakanyorwa pazasi:
http://img.YouTube.com/vi/video_id/1.jpg – Diki
http://img.YouTube.com/vi/video_id/2.jpg – Diki
http://img.YouTube.com/vi/video_id/3.jpg – Diki
+ Chii chinangwa cheYouTube Thumbanish Grabber kana Generator?
Chinangwa chikuru cheiyi YouTube Thumbonesi Mugadziri ndechekuti iwe unogona kurodha & Tora YouTube Vhidhiyo yeThumbnail Image mifananidzo mune chero saizi kubva chero vhidhiyo. Mifananidzo iyi yese inobatsira chaizvo mukuenderera mberi basa seku blogging, kugadzira, kana kuigovana nevamwe.
+ Ndedzipi dzese dziri saizi sarudzo dzeku dhawunirodha kana kugadzira tsika vhidhiyo splash screen?
Iyi YouTube Thumbnail Image Extractor inopa mana akasiyana size sarudzo uchichengetedza Splash screen:
+ Ndeipi yeYouTube icon size 2019?
Youtube tsika tsika mufananidzo unofanirwa kuva wakakura sezvinobvira, semufananidzo unozoshandiswawo semufananidzo wekutarisa mune wakadzamurwa mutambi. YouTube inokurudzira zvigunwe zvako zvetsika: Iva nesarudzo ye1280x720 (ine hupamhi hwayo upamhi hwemakumi matanhatu nematanhatu).
+ Ndingaite sei ini kutora mufananidzo kubva pavhidhiyo?
Misa vhidhiyo iri panzvimbo yaunoda kutora chifananidzo, shandisa Dhinda Screen kana Snipping Tool kuti uwane mufananidzo.
+ Iwe unowana sei iyo mufananidzo wepicha paYouTube?
Namatira yako URL url mune iri pamusoro bhokisi kuti uwane hukuru hwese hwezvigunwe.
+ Ndeipi kukura kwemavhidhiyo chifananidzo muYouTube?
YouTube Cover Photo / Channel Edhi: 2560 x 1440 pixels.
YouTube inokwirisa yako chiteshi mhizha uchishandisa inoteerera ewebhu dhizaini. YouTube inokurudzira kupinza chiteshi mu 2560 x 1440 pixels ine hukuru hwefaira re2MB.
+ Ini ndinowana sei iyo embed code yeiyo YouTube clip?
Iko kune nyore kwazvo kutora yako YouTube mifananidzo yemifananidzo yeiyo vhidhiyo yakati.
Ingoenda kune inotevera URL: http://i1.ytimg.com/vi/Your-video-id/hqdefault.jpg
Iye zvino, iwe unozofanirwa kutora iyo id vhidhiyo yeiyo kubva kuvhidhiyo Url kana kubva ku embed code yeYou vhidhiyo.
+ Ini ndinotevedzera sei mufananidzo kubva kuWhatsApp?
Tora id yako yeVhidhiyo kubva ku youtube uye unama mune yepamusoro bhokisi, tinya bhatani ❝Tora YouTube Thumbnail❞.
+ Chii chinonzi URL yevhidhiyo yevhidhiyo URL?
+ Ungaita sei download clip 1080p?
Kugadziriswa kwakanyanya kweYouTube vhidhiyo zvigunwe ndeye 1280x720.
1080p zvigunwe hazviwanikwe.
Iwe unofanirwa kushandisa skrini yekudhinda kiyi yekusanganisa kuti uwane mufananidzo.
Dzimwe mhando dzinogona kunyora dzakapfava screen kudhinda kiyi ndeye PrtScn, Prnt Scrn, Print Scr.
Kana uchishandisa Mac OS X, Press Shift + ⌘ + 3
+ Kwakachengeteka here kushandisa iyi YouTube clip yekuteedzera sevhisi?
Kuchengetedza ndiko kukoshesa kwedu kwekutanga, saka neyese data data yeiyi webhusaiti SSL yakavharidzirwa. Neiyo yakachengeteka network protocol, data rako rakachengetedzwa kubva pakuwana nevechitatu mapato. Iko kudhanilodha kweiyo chaiyo mifananidzo yemaficha inomhanya kuburikidza neakananga yakadzoreka kubatana kune YouTube maseva
Wedzera Play Bhatani kune Image Online
Inotevera munguva pfupi
Tora YouTube Vhidhiyo Screenshot Online
Tora skrini kubva kune tsika tsika
Sevha Youtube vhidhiyo madiki
Batsira iwe kurodha mavhidhiyo uye odhiyo nekukurumidza kubva kune chero webhusaiti (kunze kweYouTube)
YouTube Kunyoresa maneja
Colour Changer yeYouTube
Viga Mhinduro dzeYouTube
Radio Mode yeYouTube
Equalizer uye Amplifier yeYouTube
Nziyo Itsva Dzakanyanya
Mashandiro anoita Youtube tsika kunobetsera iwe kuwana mamwe maonero
Kutsvaga yakanakisa YouTube zvigunwe? Unoda kuwana kufemerwa kuti ugadzire yako yepamhepo tsika zvigadzirwa? Iwe uri munzvimbo chaipo!
Kugadzira mutsika mabhatani haisi imwe nzira huru yekukwidziridza brand yako seyese, asiwo iri nzira yekunyengerera vatariri kuti vasarudze vhidhiyo yako pane dzese sarudzo dziripo. Kwete, tsika yakasarudzika haizoiti kuti zvirimo zvirinani kupfuura zvazviri saka zvakakosha kuti titarise pakugadzira zvemukati zvemukati - asi iyo tepi inobatsira yako yakajeka kugutsikana kuti uone!
Kugadzira Great Thumbnails yeYouTube Mavhidhiyo
Sezvambotaurwa pamusoro apa, iwe unoda kuti zvigunwe zvako zviiswe uye kuita. Kune mashoma maitiro anowanzozivikanwa atakaratidza mu YouTube zvigunwe pazasi.
Chinangwa Chekutanga Chinzvimbo kana Chinyorwa
Kuwedzera kune aya maitiro ari pamusoro, zvaive zvakare pachena kuti kugadzira masiki
Chii Chinoita YouTube Thumbnails Kukosha
Kugadzira mifananidzo yeYouTube kwakatosiyana pane kugadzira mafambisirwo enharaunda kana kugadzira kushambadzira mifananidzo pawebhu. Sei? Nekuti mhando yako ichafanirwa kukwikwidza pamwe nehuwandu hwezvimwe zvigadzirwa.
Iyo toni, nekusvika kure, ndiyo chinhu chinokwevera zvakanyanya hanya pasina kana kutarisisa pairi.
Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe unogona kugara uchidzokera kune chero mavhidhiyo muraibhurari yako uye kugadzirisa zvigunwe mune ramangwana kana yako tsika YouTube zvikwangwani zvisinga zive chaizvo zvawaida.
Zvimwe Zvigadzirwa neZipenga Thumbnails
Haasi ese mabraketi anobuda munzira yavo yekugadzira neyakagadziriswa yavo yeYouTube. Chaizvoizvo, ruzhinji rwema chiteshi haruna kuita chero chinhu - ivo havana kusarudza chisarudzo chinobata.
Kugadzira Yako YouTube Thumbnail Designs
Chimwe chinhu chekufunga nezvehukuru hwekugadzirwa kwako. Mune mamwe mazwi, iwe uchadzidzira dhizaini iyo inonyanya kududzirwa iyo inoda kuti iwe uchinge uchichinja kunze, chinyorwa, uye mavara kana iwe uchatevedzera dhizaini inoda nyanzvi yekugadzira dhizaini nyowani?
Iyo NBA magadzirirwo muenzaniso wakanaka weetemplate zvigadzirwa zviri nyore kubereka. Chero ani ane hunyanzvi hwekugadzira hunyanzvi anogona kugadzira nyore matemplate matsva ane yakagadziriswa zvemukati.
Maitiro ekuita yako pachako YouTube thumbnail?
Chaizvoizvo harisi dambudziko. Kana iwe uchiziva nzira yekushandisa Photoshop saka unogona kuita nyore hutachiona vhidhiyo yemavhidhiyo ako kana iwe unogona kushandisa chero pa online YouTube clip maker uye Photoshop template.
Mufananidzo wako wemufananidzo wepamhepo unofanirwa kunge wakakura sezvazvinogona, semufananidzo unozoshandiswawo semufananidzo wekutarisa mumunhu akapfekerwa mutambi. Iva nesarudzo ye1280x720 (ine upamhi hupamhi hwemakumi matanhatu ematanhatu). Isa kumusoro nemafomati emifananidzo akadai saJPG, GIF, BMP, kana PNG.
Nzira dzegumi dzekuwana yakawanda paYouTube
Tevedza aya mapepa gumi kana anopfuura kubatsira kukwirisa yako YouTube mavhidhiyo kuti uwane mamwe maonero nemadhora kubva kwavari.
⓵ Usatambisa nguva yako kurongedza mavhidhiyo pasina zvirimo zvine chekuita neYouTube chiteshi chako.
⓶ Tora vhidhiyo yako newe musoro wobva waisa kuYouTube. Nyora rondedzero inonakidza yemashoko mazana matatu evhidhiyo yako uye unamise zita rako mumutsara wetsananguro.
⓷ Namatira yako yevhidhiyo zita sezvazviri mumaki. Nguva dzose shandisa zita rako chiteshi setigi. Izvo zvinobatsira kuratidza yako mavhidhiyo emavhidhiyo mune yakakurudzirwa uye usakanganwa kuwedzera yakakodzera vhidhiyo tags asi iwe unofanirwa kushandisa ivo mune tsananguro usati washandisa ivo seti tag. Kana zvisina kudaro ichafunga sekuperetera.
⓸ Wedzera ako anoregedzera mavhidhiyo link uye yemagariro midhiya mapeji anobatanidza mukutsanangura. Goverana vhidhiyo pa Twitter kana Instagram ne hashtag uye edza kuwedzera imwe yeyekutsika tag zvakare.
⓹ Tsvaga vhidhiyo ine chekuita niche yako nekushandisa inochinja Twitter tags uye uiise iwo kune yako chiteshi uye ugovane neiyo imwechete yekuita tag. Nekuita izvi kune mikana yakawanda yekuti yako mavhidhiyo anoenda nehutachiona uye kana ikaenda kune hutachiona saka iwe zvechokwadi uchaenda unowana yakawanda uye yakawanda kubva pakungoisa YouTube mavhidhiyo. Uyezve Govera paBlogger, Reddit, Tumblr, Pinterest, Google Plus uye Facebook ne tag.
⓺ Tsvaga vhidhiyo inochinja kubva kuGoogle Trends ine chekuita niche yako uye nyore kuita vhidhiyo pairi uye uzvitakure kune yako chiteshi. Nenzira iyi urikuita mikana yakawanda yevhidhiyo yako kuti uwane hutachiona hwehukama.
⓻ Kana iwe uchiziva nezvekubatana kushambadzira saka inogona kukubatsira iwe kuti uwane mamwe madhora kubva kuchiteshi chako. Sarudza chigadzirwa chakakodzera chine hukama niche yako uye ita vhidhiyo yekubata pairi uye uimise. Mushure mekudhodha isa pasiti yako yakabatana mutsetse wekutanga wetsananguro kuitira kuti kana mumwe munhu akaita yake / yake yekumhanyisa kutenga chigadzirwa chako iye anogona / anoteera chako chinongedzo kuti atenge icho. Saka kushamwaridzana iri chaizvo nzira yekuwana yakawanda.
⓼ Tarisa pane kunaka kwete huwandu uye shandisa High cpc mazwi makuru. Tevedza iwo matipi akareruka kuti uwedzere yako chiteshi maonero anoenda chaizvo kukubatsira iwe kuti uwane yakawanda uye yakawanda kubva kuYouTube.
⓽ Target premium nyika kuti ive yakanaka cpc chiyero uye tsvaga yakakwirira cpc keyword.
⓾ Gadzira yako yakasarudzika Youtube icon mufananidzo wevhidhiyo yako kuti vanhu vamuwane inonakidza. Kana iwe usingazive maitiro ekuita tsika YouTube clip ipapo unogona kungoikopa kubva kune iwo mavhidhiyo anonakidza uye ane chekuita nevhidhiyo yako. Anonakidza tepi anogara achifadza vanhu uye anovamanikidza kuti vaone vhidhiyo iyoyo. Saka chengetedza mundangariro.
Sevha youtube uye vimeo vhidhiyo ekunongedza mifananidzo yemhando dzose dzemahara. Ichi chishandiso chinorega iwe utore zvigunwe zvemhando dzose. Ingoisa URL yevhidhiyo yepicha mune iri pazasi poira uye tinya Tora Mucherechedzo Image.
Yakanakisisa YouTube Thumbnail Grabber - Chengetedza Youtube Vhidhiyo Thumbnails
Dhawunirodha yemahara youtube mavhidhiyo ekunakisa mufananidzo mu Full HD (1080), HD (720), SD, uye zvakare muhukuru. parizvino inotsigirwa mafomati: YouTube (HD, HQ, 1080p, 4K)
Ratidza kutsigira kwako uye Govera iyi webhusaiti:
Ini ndashandisa ino yekuteedzera downloader service kugadzira splash zvigadzirwa zvepurojekiti yangu iri kuuya. Yakadaro nguva saver, pamwe ichaenda kundichengetedza maawa yenguva yakazara uye inoshanda zvakakwana.